Ra’iisul Wasaaraha oo xafiiska ku qaabilay wafdi ka socday Qatar Charity+Sawiro – SBC
Ra’iisul Wasaaraha oo xafiiska ku qaabilay wafdi ka socday Qatar Charity+Sawiro
Posted by editor on August 4, 2011 Comments
Ra’isalwasaaraha dawlada KMG Soomaaliya Dr. Cabdi wali Maxamed Cali (Gaas) ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socdey hay’adda samafalka ee Qatar Charity, iyadoo kulankaasi looga hadley arimo kala duwan oo la xiriira abaaraha ka taagan Soomaaliya.
Warsaxaafadeed SBC uu soo gaarsiiyey xafiiska warfaafinta ee Ra’isalwasaaraha ayaa lagu faahfaahiyey kulankaasi wixii looga hadley waxaana uu u qornaa sidan.
Ref: XRW/War-Saxaafadeed.019/08/11 Date: 04 August2011
Muqdisho 4 August 2011
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socday Hay’ada Qatar Charity International oo ah hay’adii ugu horreysay ee caalami ah ee soo gaartay shacabka barakacayaasha ee magaalada Muqdisho. Wafidgan oo ay ka mid ahaayeen Mohamed Ader-deor, Agaasimaha Gurmadka Deg-degga ah, Ali Mubarak Al-Kubaisi ahna Madaxa qeybta xiriirka deeqbixiyeyaasha, iyo Mohamed Hashim Omar oo ah Madaxa Mashaariicda Soomaaliya.
Waxaa kaloo kulankan muhiimka ah joogey Guddoomiyaha Gobolka Banadir ahna Duqa magaalada Muqdisho Mudane Mohamud Ahmed Nur (Tarzan).
Ra’iisul Wasaaraha ayaa u mahadceliyey wafidga Qatar Charity imaatinkooda Muqdisho iyo sidii ay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu soo gurmadeen shacabka soomaaliyeed. Wafdiga ayaa iyagana uga mahadceliyey Ra’iisul Wasaaraha sidii quruxda badneyd ee loo soo dhoweeyey iyo waqtigiisa qaaliga ah ee kulankii maanta.
Wafidga ayaa warbixin kooban siiyey Ra’iisul Wasaaraha ee la xiriira kaalinta Qatar Charity iyo kaalmada ay soo gaarsiiyeen shacabka soomaaliyeed. Wafdigu waxey sheegeen inay aad ugu faraxsanyihiin inay soo gaaraan shacabka soomaaliyeed oo ay gar-gaar iyo gurmadba la soo gaaraan, waxeyna sheegeen inay qorsheynayaan inay sii kordhiyaan mucaawanadooda. Wafdiga ayaa sidoo kale sheegay inay qorsheynayaan inay mashaariic kale ka fuliyaan waddanka Soomaaliya sida mashaariic waxbarasho, kuwo caafimaad iyo kuwa shaqo loogu abuurayo dhalinyarada Soomaaliyeed.